Translator Newsletter: Alsimian’ny Haiteny, Fitenin-jatovo sy ny hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2019 3:49 GMT
Miarahaba ny GV'ers!
Tongasoa amin'ny fizarana Translator Newsletter amin'ity herinandro ity! Androany isika hiresaka momba ny…
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.huffingtonpost.com/
Rehefa mivarotra votoaty ho an'ny mpihaino manerantany, zava-dehibe ny herin'ny fandikan-teny. Arakaraka ny maha-mpandika teny tsaratsara kokoa anao, no hinoan'ny mpihaino kendrenao fa mijery votoaty orizinaly ho azy ireo amin'ny fitenin-drazany izy ireo. Niditra tamin'izany lohahevitra ny Huffington Post ao amin'ity lahatsoratra ity, miresaka momba ny zava-drehetra avy amin'ny lanjan'ny feo amin'ny famoronana fahatsapana ny fahamarinan'ny fandikan-teninao.
Fitaovana fandikan-teny vaovao amin'ny Facebook
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://www.technologyreview.com
Vao haingana ny Facebook no namorona fitaovana vaovao izay afaka manampy ny orinasa hanatsara ny fandikana eo noho eo ny fitenin-jatovo iraisam-pirenena. Ankehitriny, rehefa manoratra sata amin'ny fiteny iray ianao, dia azonao atao ny mijery azy amin'ny fiteny maro alohan'ny hamoahana azy. Ny dikanteny miseho no endrika mety ho mora vakiana kokoa ho an'ny mpisera hafa. Jereo ato ny fomba fiasan'izany rehetra izany!
Manontania mpandika teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.asymptotejournal.com/blog
Vao haingana ny bilaogy Asymptote no nampiseho fanadihadiana mahafinaritra iray miaraka amin'ny manam-pahaizany momba ny fandikan-teny, Daniel Hahn, izay milaza momba ny andinindinin'ny fandikan-teny. Tamin'ity resadresaka ity, dia nifantoka manokana tamin'ny fanontaniana napetraky ny mpamaky iray izy- misy zavatra tsy mety adika tanteraka ve? Mba hahafantarana ny valiny dia vakio ato!
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://termcoord.eu/
Izaho irery ve no tsy nahafantatra fa ny “fitenin-jatovo” dia mitovy amin'ny hoe “fiteny fohy”? Toa maro ny zavatra tsy fantatro momba ny fitenin-jatovo, tahaka ny niaviany sy ny fomba ifandraisany amin'ny mari-panondroan'ny vondrona. Tena zava-dehibe tokoa amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina ny fitenin-jatovo ka “tsy tokony hialantsika izany satria maneho ny tsy fahaizana manonona eo amin'ny mpampiasa azy, na tahaka ny fiteny tsy misy dikany sy simba”. Fantaro bebe kokoa ato ny momba ny fivoaran'ny fitenin-jatovo!
Manova ny fandikan-teny
Pikantsary nalaina tamin'ny https://www.goethe.de/ins/us/en
Mba hamaranana izay voalaza, nieritreritra aho fa hizara ity lahatsary izay navoakan'ny Goethe-Institut New York ity rehefa niresaka tamin'i Susan Bernofsky izy ireo. Iray amin'ireo mpandika teny fanta-daza indrindra izy ary niresaka tamin'izy ireo momba ny zavakanton'ny fandikan-teny sy ny toetry ny literatiora adika any Etazonia. Antenaiko fa ho ankafizinao izany
Miaraha amin'ny Global Voices Lingua ankehitriny!